Multifunction ZNC Sinker EDM Machine 580mm Max Anya N'ihi akpụzi nhazi
Modeldị ihe atụ: CNC540 Isiokwu Njem: 500 * 400 * 200mm Modeldị Modeldị: CNC EDM Ngwa Ngwa Ngwa Ihe Mmanụ: 1300 * 720 * 450mm Nha Isiokwu: 800 * 400mm Max. Ibu Ibu nke Eletrode Isi: 150kgs Precision Spark Erosion ZNC CNC EDM Die Sinking Machine maka ebu nhazi CNC 540 1.Various machining ụzọ nwere ike ona dị iche iche ndị ahịa chọrọ. 2.Bottom mma ọrụ - Mgbe machining ruru chọrọ omimi, ọ ga-nọgidere na-arụ ọrụ maka ezi machining usoro. 3. Automatic compute, ntupu na adjustme ...
700 * 400mm Isiokwu Size CNC EDM Machine, Kwụsie ike CNC Sinker EDM Machine CNC450
Isi Electrode: 280mm Nlereanya: CNC450 Isiokwu Ntugharị: 450 * 350 * 200mm Agba: Nhọrọ Typedị :dị: CNC EDM Size Of Container: 1100 * 710 * 450 Stable na a pụrụ ịdabere na ya ZNC540 eletrik eletrik maka nhazi nhazi 1. Nkwụsi ike na ntụkwasị obi maka nhazi nhazi. 1.High ọnọdụ nkwenye: kacha mma maka ịkpụzi akụkụ dịka ọnwụ, mkpọpu ala ma ọ bụ na-agwụ ike 3. Onye na-ahụ maka akara ngosi Taiwan, onye a pụrụ ịdabere na ya. 4.wider nso nke ngwa: mkpọpu ala, na-agwụ ike, ọkara-ibu mil ...
High Stability CNC EDM Machine, 650L Myọcha akpa Cude EDM ebua Machine
Nlereanya: CNC1680N Isiokwu Njem: 1600 * 800 * 500mm Size Of Container Container: 2550 * 1500 * 560mm Size Isiokwu: 1700 * 1000mm Max. Ibu Of Eletrode Head: 400kgs Net arọ: 9000kg 1000 * 600 * 450mm table njem CNC EDM igwe maka ebu nhazi CNC 1060N 1.Ezigbo ime ụlọ ime ụlọ, na-eji PCB imewe maka ịgbatịkwu ọrụ ndụ, ọrụ nchekwa na njikwa dị mfe. 2. Adomụta MOSFET electrocircuit, na elu na-agba nhazi, na ala ọnwụ nke electrode 3. Esemokwu na-eguzogide PC thi ...